SHWEMOM Knowledge is Power
မင္းသားၾကီး Jackie Chan ရဲ႕ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုး ဇာတ္ကား ၅ ကား
by Pyi Hein on 2021年2月20日 at 10:55 AM
ေဟာင္ေကာင္ရဲ႕ ကမၻာေက်ာ္ အက္ရွင္မင္းသားၾကီး Jackie Chan ကိုေတာ့ ရုပ္ရွင္ခ်စ္ပရိသတ္တိုင္း သိရွိၾကျပီး ျဖစ္မွာပါ။ အသက္ ၆၆ ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္တဲ့ Jackie Chan ဟာ အခုအခ်ိန္မွာဆိုရင္ေတာ့ အသက္ၾကီးေနျပီျဖစ္ေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္တုန္းက သူရဲ႕ ထြက္ခဲ့သမွ် အက္ရွင္ဇာတ္ကားတိုင္းလိုလိုဟာ ၾကည့္လို႔ေကာင္းတဲ့ အက္ရွင္ဇာတ္ကားေတြခ်ည္းပါပဲ။ Jackie Chan ရဲ႕ ထူျခားခ်က္ကေတာ့ သူရိုက္ခဲ့သမွ် ဇာတ္ကားတိုင္းရဲ႕ အက္ရွင္ခန္းတိုင္းလိုလိုမွာ လံုးဝလူစားမထိုးပဲ သူကိုယ္တိုင္ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ဒီေန႔မွာေတာ့ မင္းသားၾကီး Jackie Chan ရဲ႕ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုး ဇာတ္ကား ၅ ကားကို ပရိသတ္ေတြအတြက္ ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္။ ၁။ Police Story Jackie Chan ရဲ႕ ပထမဦးဆံုးေသာ Police Story ဇာတ္ကားဟာ
Pad Man ဇာတ္ကားနဲ႔ပတ္သတ္ျပီး အမွတ္တရေတြကို ေျပာျပခဲ့တဲ့ Sonam Kapoor
by Pyi Hein on 2021年2月20日 at 10:51 AM
Bollywwod ရုပ္ရွင္ေလာကရဲ႕ နာမည္ေက်ာ္မင္းသမီးတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Sonam Kapoor ကိုေတာ့ ရုပ္ရွင္ခ်စ္ပရိသတ္ အမ်ားစု သိရွိၾကျပီး ျဖစ္မွာပါ။ Neerja, Khoobsurat, The Zoya Factor, Aisha, Pad Man အစရွိတဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြမွာ ေခါင္းေဆာင္မင္းသမီးတစ္ဦးအျဖစ္ ပါဝင္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး ပရိသတ္ေတြရဲ႕ စိတ္ႏွလံုးကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၉ ရက္ေန႕ကေတာ့ Sonam နဲ႔ မင္းသားၾကီး Akshat Kumar တို႔ ရိုက္ကူးခဲ့တဲ့ Pad Man အမည္ရဇာတ္ကားဟာ ၃ ႏွစ္ျပည့္သြားခဲ့ျပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလည္း ဒီဇာတ္ကားနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ အမွတ္တရေတြကို Sonam က ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့ပါေသးတယ္။ Pad Man ဇာတ္ကားကိုေတာ့ နာမည္ၾကီး Bollywood
Yangon Breaking News စစ္မွန္ၿပီး တိက်မွန္ကန္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ စီးပြားေရး သုတ ရသ ႏိုင္ငံေရး
by Akio Nobuo on 2019年7月12日 at 10:49 AM
သမ႐ိုးက်စီးပြားေရး ( Linear economy ) တစ္ခုမွေန၍ CIRCULAR ECONOMY တစ္ခုအျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ဆိုသည္မွာ လြယ္ကူေသာအရာတစ္ခုမဟုတ္ပါ။ သို႔ေပမယ့္ ယခုလိုေျပာင္းလဲမႈသာ ေအာင္ျမင္သြားခဲ့မယ္ဆိုလွ်င္ ဤစီးပြားေရးစနစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္သာမက တစ္ကမာၻလုံးအတိုင္းအတာအထိပါ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာဘဝေတြ ဖန္တီးဖို႔၊ ကုန္က်စရိတ္ေတြေလ်ာ့ခ်ဖို႔နဲ႔ ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ …
by Akio Nobuo on 2019年7月2日 at 10:40 AM
ရန္​ကုန္​ – ဇူလိုင္​ ၂ ​ေစ်းဝယ္​ခ်စ္​သူမ်ား ႏွစ္​သက္​​ေက်နပ္​​ေစမည္​့ အတန္​ဆုံးႏႈန္​းထားျဖင္​့ အလန္​းဆုံးပစၥည္​းမ်ားကို ဝယ္​ယူရရွိႏိုင္​မည္​့ Grand Yangon Sale မိတ္​ဆက္​ျခင္​းအခမ္​းအနားကို ယ​ေန႔ဇူလိုင္​လ(၂ )ရက္​​ေန႔က ရန္​ကုန္​ၿမိဳ႕၊ဂ်န္​းရွင္​းစီတီးပ႐ိုမိုးရွင္​းဧရိယာ၌ က်င္​းပခဲ့ပါသည္​။ ယ​ေန႔မိတ္​ဆက္​လိုက္​သည္​့ အဆိုပါ Grand …
THIT HTOO LWIN (Daily News) နေ့စဉ် မြန်မာသတင်း၊ နိုင်ငံတကာသတင်း၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ အနုပညာ၊ မြန်မာဂျာနယ်၊ ဗီဒီယိုသတင်းနှင့် ကျန်းမာရေး ဆောင်းပါးများကို ဝေဝေဆာဆာတင်ပြနေသည့် ဆိုဒ်ဖြစ်ပါသည်။ http://feeds.feedburner.com/thithtoolwin/yIWV
by THITHTOOLWIN on 2021年9月7日 at 3:41 AM
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကနေပြီးတော့ ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာ၇ရက်မှာနိုင်ငံတဝန်း အရေးပေါ်အခြေအနေဆိုပြီး ယာယီသမ္မတ ဒူဝါလရှီးလရဲ့ မိန့်ခွန်းပြောဆိုမှုနဲ့အတူ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီကြေညာချက်မှာ ၂၀၂၁ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်မှ စတင်ပြီး စစ်ကောင်စီ အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အချုပ်အခြာအာဏာကို သိမ်းယူထားပြီး ပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်အန္တရာယ်ပြုနေတာကြောင့် ပြည်သူများကလည်း နည်းလမ်းစုံနဲ့ စစ်အာဏာရှင်ကိုခုခံ
by THITHTOOLWIN on 2021年9月7日 at 3:37 AM
NUG #DDay #ဒူဝါလရှီးလစက်တင်ဘာ ၇ ရက် က စပြီး စစ်အာဏာရှင် ဆန့်ကျင်ရေး ပြည်သူလူထုရဲ့ တော်လှန်ရေး စတင်ပြီလို့ အမျိုးသား ညီညွတ်ရေး အစိုးရ NUG ရဲ့ ယာယီ သမ္မတ ဒူဝါလရှီးလက အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီ အပေါ် စစ်ကြေညာ လိုက်ပါတယ်စစ်အုပ်ချူပ်ရေးကို တနိုင်ငံလုံး လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် တွန်းလှန် တိုက်ဖျက်ကြ ဆိုပြီး NUG သမ္မတက ပန်ကြားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး PDF တပ်များ အနေနဲ့ မိမိတို့ ဒေသထဲမှာ ရှိနေတဲ့ စစ်
by intellasia on 2021年9月17日 at 11:00 AM
Intellasia East Asia News SHANGHAI, Sept. 17, 2021 /PRNewswire/ -- 111, Inc. (NASDAQ: YI) ("111" or the "Company"),aleading tech-enabled healthcare platform company committed to digitally connecting patients with medi...
Intellasia East Asia News HONG KONG, Sept. 17, 2021 /PRNewswire/ -- Global Cord Blood Corporation (NYSE: CO) ("GCBC" or the "Company"), China's leading provider of cord blood collection, laboratory testing, hematopoietic ste...
by DVB on 2021年9月17日 at 12:16 AM
မကွေးတိုင်း၊ တောင်တွင်းကြီးမြို့ မြောက်ဘက်အထွက် အသောကဘုန်းကြီးကျောင်းအနီး တောင်တွင်းကြီး-မြို့သစ် ကားလမ်းကိုပိတ်ပြီး တပ်စွဲထားတဲ့ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ် စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့ညက ဗုံး ၂ လုံးပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ ဒေသခံတွေဆီက သိရပါတယ်။ ဒေသခံတဦးက “စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမယ့်ပုံပဲဗျ။ ပထမအကြိမ် ဗုံးကွဲတဲ့အသံကြားပြီး သိပ်မကြာဘူး လူနာတင်ကားတွေရောက်လာပြီး ထိတဲ့ကောင်တွေကိုတင်သွားတယ်။ ဆေးရုံပို့တယ်နဲ့တူတယ်။ နောက်တလုံးကွဲတော့လည်း ထိမှာပါပဲ” လို့ ပြောပါတယ်။ အဆိုပါစစ်ကောင်စီ တပ်စွဲထားတဲ့ စစ်ဆေးရေးဂိတ်မှာ စက်တင်ဘာ ၁၆ ရက်နေ့ည ၁၁ နာရီဝန်းကျင်နဲ့ ၁၂ နာရီဝန်းကျင်တွေမှာ ဗုံး ၂ လုံးရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ပေါက်ကွဲခဲ့တာပါ။ ဗိဿနိုးနယ်မြေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်၊ ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်ထန်ထွဋ်က “ဟုတ်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့ရဲ့ ဗိဿနိုးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေက ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်လိုက်တာပါ။ အသေးစိတ်ကို နောက်မှထုတ်ပြန်လိမ့်မယ်။ စစ်ကောင်စီရဲ့ နလပိန်းတုန်းကောင်တွေကလေ ပြည်သူကိုနှိပ်စက်ရတာ
by DVB on 2021年9月16日 at 11:54 PM
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ဆောမြို့နယ်မှာ စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရကနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက ဆော PDF နဲ့ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ စစ်သား ၁၀ ယောက်ထက်မနည်း ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ ဆော PDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ဆော-ကံကြီး လမ်းပိုင်းမှာ မွန်းလွဲ ၃ နာရီခွဲလောက်က လမ်းဘေးဝဲယာကို ပစ်ခတ်ပြီးတော့ တက်လာတဲ့ စစ်ကောင်စီတပ် အင်အား ၁၀၀ လောက်ပါတဲ့ စစ်ကြောင်းကို ဆော PDF အထူးပြောက်ကျား မိုင်းတပ်ဖွဲ့က မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ရာမှာ စစ်ကောင်စီဘက်က ၁၀ ယောက်ထက်မနည်း ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ မြေပြင်တိုက်ပွဲ အခြေနေအရ သေဆုံးတဲ့ စာရင်းကို အတိကျ အတည်မပြုနိုင်သေးဘဲ စစ်ကောင်စီတပ်တွေက လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ပစ်ခတ်ပေမယ့် ဆော PDF တပ်ဖွဲ့ဘက်က အထိခိုက်အကျဆုံး မရှိဘဲ ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့
by ijadmin on 2021年2月12日 at 5:14 AM
Zombie virus ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားပြီး ခြောက်လအကြာမှ မြို့တစ်မြို့လုံးဟာ ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကို ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ကစားသူဟာကျန်ရှိနေတဲ့လူအချို့နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး အသက်ရှင်သန်နိုင်ရန်အတွက် zombie တွေကို တိုက်ခိုက်ကစားရမယ့် ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ထည့်သွင်းကစားလိုသူတွေအနေနဲ့ Play Store ကနေအခမဲ့ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Android version 4.1 နဲ့ အထက်မှာထည့်သွင်းကစားနိုင်မယ့် ဂိမ်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Download >>> Click >>> -သီဟ »»» အင်တာနက်ဂျာနယ်ကနေ တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ သတင်းတွေနဲ့စိတ်၀င်စားဖွယ်ရာ အ‌ကြောင်းအရာတွေကို နေ့စဉ် ည(၇) နာရီအချိန်မှာ ဒီဂျစ်တယ်ဗားရှင်း သတင်းစာစောင်လေးအနေနဲ့ ဒီနေရာ ကနေ ရယူဖတ်ရှုနိုင်မယ့် IJ Mini Newspaper ««« The post State of Survival (Android) first appeared on Internet Journal.
ကလေးတွေအတွက် ဉာဏ်စမ်း ကစားရမယ့် ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Valentine day နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရုပ်ပုံတွေကို ထည့်သွင်းပေးထားပြီး ကလေးတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို ပိုမိုတိုးတက်လာစေရန်အတွက် စီစဥ်ဖန်တီး ပေးထားတဲ့ ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ထည့်သွင်းကစားလိုသူတွေအနေနဲ့ Play Store ကနေအခမဲ့ ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Android version 4.1 နဲ့ အထက်မှာထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မယ့် ဂိမ်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Download >>> Click >>> -သီဟ »»» အင်တာနက်ဂျာနယ်က နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ စာဖတ်ပရိသတ်တွေထံ အီးမေးလ်ကနေတစ်ဆင့်ရောက်ရှိလာဖို့ ဒီနေရာက တစ်ဆင့် Subscription လုပ် ထားလိုက်ပါ ««« The post Valentine Day Game for Kids (Android) first appeared on Internet Journal.
Yangon Fresh and Juicy News from Asia
by Coconuts Yangon on 2021年9月16日 at 4:28 AM
Three Myanmar women yesterday joined the likes of Prince Harry, Joe Biden and Youn Yuh Jung as the year’s most influential people, according to Time magazine. In its annual list of the year’s 100 most influential people, the magazine named Burmese-American NASA engineer MiMi Aung, Kachin activist Esther Ze Naw Bamvo and Ei Thinzar Maung, ... This article, Three Myanmar women among ‘most influential’ of 2021: Time, originally appeared on Coconuts, Asia's leading alternative media company.
by Coconuts Yangon on 2021年9月15日 at 4:37 AM
A bomb exploded at the Ocean Supercenter in Yangon’s9Mile area this morning, the latest inastring of attacks in the city that opposition forces say they have carried out since the government in exile declared war on the ruling junta. Insurgent groups in Hlaing Tharyar Township claimed responsibility for at least six ... This article, Bomb at Ocean Shopping Mall as attacks multiply across Yangon, originally appeared on Coconuts, Asia's leading alternative media company.
Why would papers writers you pay anybody for services?